Liverpool Oo Anfield Ku Gumaaday Spartak Moscow, Philippe Coutinho Oo Saddexley Dhaliyay, Sadio Mane Oo Laba Gool Ugu Jawaabay Iyo Reds Oo Kaalinta Kowaad Kaga Soo Baxday Groupkeeda. – GOOL24.NET
Liverpool ayaa kaalinta kowaad kaga soo baxday groupkeeda kadib markii ay Anfield si xun ugu gumaaday kooxda Spartak Moscow, waxaana kulankan saddexley goolal ah ka dhaliyay Philippe Coutinho halka Sadio Mane uu laba gool isna ka dhaliyay. Roberto Firmino ayaa dhiniciisa shabaqa soo taabtay halka Mohamed Salah uu isna dhamaadkii ciyaarta uu dhaliyay goolka todobaad ee Reds , waxayna Liverpool kooxda martida ahayd ee Spartak Moscow ay ku xasuuqday 7-0
Liverpool ayaa si naxariis daro ah Anfield ugu gumaaday kooxda ay hore barbaraha 1-1 ka ahaa Russia kula soo gahay ee Spartak Moscow waxaana kulankan wacdaro ka dhigay Coutinho oo kabtanka kulankan ahaa isaga oo markii ugu horaysay wayihiisa ciyaareed saddexley u dhaliyay Liverpool.
Intaa wixii ka danbeeyay Spartak Moscow ayaa si cajiib ah u ciyaartay waxayna si xoogan u raadisay qaabkii ay ugu soo laaban lahayd ciyaarta laakiin kooxda Klopp ayaa bilawday in ay markeeda gadaal u degto markasta oo ayna kubbada haysan waxayna taasi culays wayn ku noqotay in Spartak ay fursado fiican abuuri karto.
Darbooyin halis ah ayay difaaca Liverpool iska dabooleen halka Karius uu u soo jeediyay bartilmaameedka ay kooxda martida ahayd goolka ku doonaysay, laakiin Liverpool ayaa goolal intan ka badan heli kartah iyada oo Sadio Mane iyo Mohamed Salah ay lumiyeen fursado goolal loo fishay.
DAQIIQADII 50 AAD Alla Maxay farxad u ahayd!! Philippe Coutinho ayaa markan dhamaystirtay saddexdleyda taariikhiga ah ee uu Anfield kaga dhaliyay kulan Champions Leaque ah isaga oo markan caawin uu ka helay James Milner ugu qubeeyay kooxda uu shabaqeeda caadada ka dhigtay ee Spartak Moscow waxayna ciyaartu noqotay 5-0 ay Liverpool ku dubanayso Spartak Moscow.
DAQIIQADII 76 AAD Daniel Sturridge ayaa markiiba gool caawin u sameeyay Sadio Mane oo markiisa dhaliyay goolkiisa labaad ee kulankan laakiin waxa uu goolkani noqday mid ceeb wayn ku noqday kooxda Spartak Moscow ee uu khakhtarka kooxoodu hore ciyaartoyda uga sii madnuucay in ay wax galmo ah la sameeyaan xaasaskooda si ay kuankan iskugu diyaariyaan, wuxuuna Mane ciyaarta ka dhigay 6-0 ay Reds ku gumaadayso Spartak Moscow.